Afera Arfa, Fêtard, Ontsa anao.... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Andriamatoa Filoha a,
Rehefa hitady asa an, dia mampiseho "CV"
Vao tsy mazavazava, dia efa "allez" mandeha !
Ianao indray ve no hatoro, ianao anie "expert" e
Dia tsy kobonao mihitsy ve hoe, i Arfa anie ka mersenera !
Niasa tao aminao izy, navelanao nanofana
Tànan-kavananao teo amin'ny fiarovana
'Zao nipoaka 'lay afera, dia lazainao fa olon-dratsy
Ketrehina hosamborina, tetehina ho faty.
Aiza re izany e ! Ianao anie Filoha e !
Ny momba an'i Arfa ve, dia tsy kobonao mialoha !
Raha izay no tena izy, dia marina sy ampy
Ny teny nolazain'i Filoha "Donald Trump"
'Reo mpiara-miasa aminao, arovanao izay tsy izy
'Zareo anefa dia manaiky, fa tena nisy vola roa valizy
Dia tsy menatra ve ianao, mandainga ankitsirano
Mifampiaro amin'ny ratsy, mifanao kian-trano an-trano !
Mionona izahay, ary manaiky handray lesona
Raha hoe ny nahatongavanao ety, dia nateraka hampiesona.
*** fanasina7 *** 042501181953
Vinaiko eto re Rajao, raha mbola ianao no hitondra
Fa ho gida-maimbo i Gasikara, afaka taona vitsy monja
Ho fito arivo any angamba, ny kilaon'ny vidim-bary
Ary ny iray €uro, ho lasa enina arivo ariary.
Vinavina koa ny ahy, fa hitombo ny isan'ny mpangataka
Be no tsy hahazaka adim-piainana, hanampy ny mpatory an-tatatra
Hanara-penitra kokoa, 'lay fahantrana hoentinao
Amin'izay fotoana izay, hovoaporofo 'lay teninao.
Hitako eto ihany koa, ho potipotika ireo làlana
Fa tandrametaka avokoa, raha izay fanamboarana
Toy izany ihany koa, ireo "tatezana" vao vita
Vao andalovan'ny tadio, dia hanjavona tsy hita.
Fa ny tena azo antoka, ary tena hanara-penitra
Dia ianareo mpitondra ao, ho matavitavy endrika
Tsy telo baoritra na roa valizy, ny kopaka hiaraha-manao
Fa an-kaontenera mihitsy angamba, no hifamezivezy ao.
"Bon anniversaire" ry fahantrana !
Mifalia 'nareo ambonin'ny lalàna !
*** fanasina7 *** 052501180610
Isan’andro fety foana
No andaniana fotoana
Nefa ny vita manoloana
Tsisy fa dia babangoana
Natao ny lalam-baovao
Zara raha nampiasaina
Rava izao ilay godorao
Lavaka tsy tambo isaina
Mba ho fankalazàna izany
Dia ny fanakatonana
Ilay orin’asa any ho any
Avy eo mitohy ny lanonana
Ressort efa ho efa taona
Nitroatra teny foana foana
Ny niafarany dia tapaka
Mananasy efa ho lo
Tehirizina ela be
Dia hasiso be tokoa
Efa efa taona anie e!
Tsy aleo ve mba manaja tena
Raha tsy hampandroso firenena
Tsy ny fananganam-pahavalo
No hahafoana ny dahalo
mampamangy any amin-dRavalo
Baritafika - Ny tononkaloko
18 Janvier, 11:29 ·
Ontsa anao ny foko ry Tanindrazako lalaiko
Tsotra loatra ianao ka itsahin’ny adala
Ireo tarainanao tsy mba misy mpahalala
Nefa tiako anie izany Gasikara izany
Raha anjakan’ny korana sy filamina hatrany
I Madagasikara ho an’ny Malagasy
Hoy ireo taloha raha nikiry sy nihafy
Hananan’ny taranaka lova tsara indrindra
Hiaina am-pifaliana, tony ary koa mirindra
Malahelo loatra aho mitazana anao
Mahita ireo mianjady, disadisa lava izao
Navalona tanteraka raha ny hoe firaisankina
Misarasara-bazana, milona anaty fandrafiana
Ny anio ho vita ihany, mitety ireo tontolo eny
Fa ny taranaka handimby, hanao ahoana izy ireny?
Moa hisy ny mpiahy, hitarika sy hanoro lalana
Sa hiritarita anaty tevan-pivalanana?
Anjakan ny efa voky, tsy ahazaka tena intsony
Tamana dia tamana rehefa tojo eny ambony
Modely moa ireny? Aoka etsy tsy hifamitaka
Mpandalo fotsiny ihany, tsy tompony fa mpindrana
Ry Malagasy namana, mankahery anao aho
Manoloana ireo mitranga iainanao izao
Firenena iombonana io ka tsy atsipy sy ariana
Ndao hiara-hientana hampody indray ny FIFALIANA
Baritafika (boky : Iny Lehilahy Iny - Baritafika)